प्रधानमन्त्रीले विदेश नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे के भने ? – Nepal Press
प्रधानमन्त्रीले विदेश नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे के भने ?
२०७८ जेठ १४ गते १९:१२
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को बजेट भाषणको पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे । सो अवसरमा उनले मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय नीति र विदेश सम्बन्धबारे पनि चर्चा गरे ।
प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टिको तारो यसपटक ठूला औद्योगिक राष्ट्रहरुको समूह जी-सेभेन र जी-ट्वान्टीप्रति लक्षित थियो । कोभिड-१९ विरुद्धको खोपको असमान वितरणप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्रीले ती मुलुकहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्व बहन गर्न सुझाए ।
दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने विकासशिल मुलुकहरुको प्रयासमा महामारीले चुनौति खडा गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले महामारीविरुद्धको विश्वव्यापी सहकार्यमा जोड दिए । सबै सुरक्षित नहुँदासम्म कोही पनि सुरक्षित हुन नसक्ने कुरा मनन गर्न प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरे ।
प्रधानमन्त्रीले विदेश नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे आफ्नो सम्बन्धमा के-कस्ता कुरा भने त ?
नेपालको अन्तर्राष्‍ट्रिय सम्बन्धमा उल्लेख्य विस्तार भएको छ। अभूतपूर्व राष्‍ट्रिय सहमतिका साथ लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समावेश गरी नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरिएको छ। हालसम्म १ सय ७० मुलुकसँग कुटनीतिक सम्बन्ध विस्तार भएको छ । भर्चुअल माध्यमबाट उच्चस्तरीय वार्ता तथा सम्वाद भएका छन्। प्रतिभा प्राप्‍ति केन्द्र (ब्रेन गेन सेन्टर) सञ्‍चालनमा आएको छ।
प्रकाशित: २०७८ जेठ १४ गते १९:१२